Chii zvakawanda, Yiling ane simba tsvakurudzo chikwata, iro rinoumbwa 29 academicians muna China, dzimwe vepamusoro kusanganisira nyanzvi vakadzoka, nyanzvi dzekunze, vanachiremba, vanatenzi uye ose vashandi basa.
Yiling mishonga boka , Chinese mishonga dzakanyorwa makambani 50 (Stock Code: 002603), muridzi ano chigadzirwa mutsetse nokuda Kamudzira, nyoro Kamudzira, piritsi, granule, mura jekiseni nezvimwewo, akaongorora kwakakomba mishonga, kusanganisira: TCM, zvoutano zvigadzirwa, vokumadokero Formulations uye TCM zvidimbu etc.
Vamwe bvumidzwa mishonga kunyanya bundu (anticancer) -YangZhengXiaoJi (加链接) Kamudzira, ine pachena uye simba chaizvoizvo kuti kenza varwere. Muna October 2017, vakuru Medical Research Centre, yakatangwa Yiling Group Company uye Cardiff University iri UK yave nheyo 4 kwemakore.
Muzinda hwapedyo yakadzika kukurukurirana uye pamwe muna Chinese mushonga pamusoro tsvakurudzo bundu, chiremba kushanda & kugovana musika mari. It yakatanga zvakadzama hurongwa kutsvakurudza Chinese mushonga YangZhengXiaoJi Kamudzira, rakaratidza kuti zvinobudirira kunogona tunodzivisa zvakasiyana-siyana nebundu metastasis, tunodzivisa kuvandudzwa midziyo ropa bundu, achitungamirirwa rubatso chirwere dzidziso.
ShenLingLan, rumwe rudzi anticancer zvinodhaka, rinokosha wemafuta zvetsika Chinese mushonga yakakodzera varwere vaviri kushayiwa chirwatata uye itsvo, ropa stasis uye toxin kuunganidza vasati uye pashure radiotherapy uye mishonga. Inogona kuvandudza kuneta mupfungwa, kurukutika, usimbe, muviri uremu uye zvichingodaro.
JinLiDa granule, nokuti mhando 2 cheshuga mellitus Qi uye Yin Deficiency Syndrome, zviratidzo: nyota kunwa, polyorexia, weti, muviri zvishoma nezvishoma mutete, kurukutika, vangadikitira, Fanre, kupatirwa etc.
Bazi tonifying itsvo capsules, itsvo tonifying uye kwetembiricha Yang. Kushandiswawo itsvo Yang kushaikwa kunokonzerwa muchiuno uye ibvi marwadzo, dzungu uye tinnitus, Shenpi kuneta, kukanganwa, mukupandukira chando.
Jujuboside Oil Kamudzira. Mumwe utano zvokudya mhando ikava Kamudzira chimiro, Zizyphus jujube tsanga mafuta zvinogona kudimbudzira nguva hope latency, uye kuwedzera nguva uye mwero kunonoka chinozunguzirwa hope, kureva kudzika hope uye nehope. Chaizvoizvo anoshanda. mapepa Vakawanda akashuma.
By ikozvino, Yiling zvigadzirwa vave aivigirwa kuna South Korea, Vietnam, England, Canada, Netherlands, Singapore, Russia uye zvichingodaro.
Yiling Hospital pashure pemakore 20 okukura kubudikidza kusvetuka uye miganhu yazova Integrated Chinese uye Western mushonga chipatara ano, zvikabatanidzwa riri kumusoro pamwero kushanda TCM mu China.
Mabatirwo tsandanyama atrophy itsva kudzidza kudzivirirwa uye kudzora Chinese National Traditional Chinese mushonga Kutarisirwa nyanzvi pfungwa - tsandanyama atrophy kuti National zvetsika Chinese mushonga Kutarisirwa nyanzvi nezvechii, asi tsandanyama atrophy kuramba dzidzo chawo, yakatsaurirwa gwenya dzouropi chirwere, myasthenia gravis, tsandanyama dystrophy chirwere uye nemultiple sclerosis uye zvimwe zvirwere chetsinga.
Department of rheumatology nokuda Hebei Province kiyi dzakagadzirirwa tsika Chinese mushonga, kushandisa nechinzwano zvokunze kurapwa, uye kubudirira chakabatsira pakurapa scleroderma, polymyositis, Sjogren urwere, chirwere Behcet vake, rheumatism, RA chirwere, ankylosing spondylitis chirwere ne zvaainazvo pose uye nemakanzuru.
Oncology dhipatimendi (加链接) Chine TCM uye vokumadokero mushonga pamwechete, vakabudirira kurapwa zviuru kenza varwere rose. For siyana zvokukura kenza varwere vave kurapa nzira yakasiyana, kubatsira varwere kuvandudza rokuzvidzivirira, kuvandudza WBC, kuvandudza unhu mupenyu uye achawedzera upenyu. Kunyanya kunaka mugarisane kenza yemazamu, kenza Colorectal, kenza yeprostate, kenza yemapapu, gastric kenza uye zvimwe kenza.
Department Angiocardiopathy, inokosha National TCM Clinical dhipatimendi, researches uye anovandudza dzakatevedzana mushonga pasi kutungamirirwa tsinga dzidziso academician Wu Yiling kudzivirira uye kurapa zvemwoyo chirwere kubudikidza wemishonga zvetsika Chinese uye vokumadokero mushonga, kunyanya nechirwere chemwoyo, arrhythmia uye chirwere chemwoyo. Vose kuratidzwa uye chinokonzera chirwere chinogona kurapwa, uye zvokurapa zviri vakakurumbira.
Yiling Health Center : Yiling Health Town ne 'dredging rubatso utano Kuchengetedzwa tsika' sezvo kutungamirirwa yave kuvhenganisa utano Kuchengetedzwa nemagariro ruzivo, utano Kuchengetedzwa chirongwa ruzivo, utano zvakanaka, dzaishandiswa zvinodhaka, utano hope, utano Kuchengetedzwa uye nemazororo mari, utano kunotenga uye mabhizimisi kuratidzwa uye mumwe-vanorega papuratifomu utano ndichengetedze.
A shanu nyeredzi hotel, wokutanga utano dingindira hotera iri China, ane Chinese resitorendi uye Western chikafu resitorendi, pane utano yezvitoro mairi. Chinoumba basa, zvikuru chaiyo chinhu pamusoro Yiling Health Centre, mauri inoshanda TCM vanachiremba uye nyanzvi dzakasiyana kushanda zvirwere zvakasiyana.
Pano unogona kuwana kupfuura hwomutambarakede ezvinhu, kupfuura basa uye ruzivo nyanzvi achatora nehanya utano hwako.
Yiling Medical Kuongorora Center , munhu ano utano ongororo, ane zvakatipoteredza yakashongedzwa utano utariri centre pamwe yepamusoro zvivako kuitira kuti unogona kunakidzwa VIP kurapwa.
Characteristics kuongorora mabasa anosanganisira: kuongorora nomumbure uye rokuongorora, makondo muchipata utano mamiriro muviri kushanda pakuvheneka, tsinga ropa rose mudziyo kuonekwa, kuderera vasabatwa ropa, Gene kuonekwa, chirwere cheshuga pangozi kuongororwa, TCM Constitution zvitupa.
Yiling International Travel Agency, inopa vhiza basa, inishuwarenzi conselltion, matikiti, hotera Réservation basa, dzakawanda toerisme basa uye zvimwe kufamba sangano mabasa zvinhu.
Varwere : unogona kuuya uye vawane revatema kurapwa, vose TCM & Western Medicine, uye zvokudya, pekugara, zviitwa, psychotherapy, zvose zvinobatanidzwa kukanganisa utano anogona kutorwa mu edu kurapwa kuronga.
For Sub-utano vanhu : uri mutano, hazvisi utano zvakakwana, unofanira kuva zororo rakanaka, zvakakodzera ndangariro nezvoutano hwako, uyai vanogara Yiling Health Centre, tichashandisa TCM kutarisira iwe.
Nokuti vanhu vanoda kugara mune zvokurapa kuongororwa : kuuya kuwana zvokurapa rwendo, isu tichava yenyu utano utariri nyanzvi zvose hwako. Tichadaro aramu mangwanani nyevero utano hwako, kubata Sub-utano isati anopinda chirwere.
Zvose unofanira kusika chakanaka Website